बेरोजगारी समाधान, लैंगिक विविधताको सम्बोधन, गरिबी निवारण अनि अपराध निराकरणका लागि राष्ट्रको ठोस नीति बन्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले यी सबको व्यवस्थापनका लागि दह्रो पाइला चाल्नुपर्छ । यसमा नागरिक समाजको नाताले चिकित्सक, मिडियाकर्मीको सहयोग अपरिहार्य छ । हाम्रो पूर्वीय संस्कृति नारीपीडक कदापि थिएन । ‘मातृदेवो भव’ भनी उद्घोष गर्ने, ‘माता मे भूमि:...’ भनेर जन्मभूमि, राष्ट्र एवं पृथ्वीलाई समेत आमा मान्ने उद्गारले ओतप्रोत संस्कृतिका धनी हामीले कसरी महिला हिंसालाई मान्यता दिन सकौंला र ? यी सबै तथ्यलाई हृदयंगम गर्दै उच्च सांस्कृतिक अनि सभ्य जीवनस्तर बनाउन जुट्ने कि ! डा. रिसाल धुलिखेल अस्पतालमा कार्यरत मनोचिकित्सक हुन् ।